Ithuluzi Lokulungisa i-Outlook. Isoftware Ye-Outlook Recovery. Ithuluzi Lokulungisa i-PST.
4.90 / 5 (kusuka kumavoti angu-1,603)
Kungani DataNumen Outlook Repair?
Izinga lokutakula yi-most umbandela obalulekile womkhiqizo wokutakula we-Outlook. Ngokususelwa ekuhlolweni kwethu okuphelele, DataNumen Outlook Repair inezinga lokululama elihle kakhulu, ingcono kakhulu ukwedlula noma yiziphi ezinye izimbangi, kufaka phakathi ithuluzi lokulungisa i-Inbox (scanpst) namanye amathuluzi wokulungisa i-PST, emakethe!
Funda kabanzi mayelana nokuthi kanjani DataNumen Outlook Repair kubhema umncintiswano
Bengisebenzisa olunye uhlelo ukuvumelanisa umbono wami
Julayi 17th, i-2020
ISt Albans. UK
Julayi 9th, i-2020
Juni 2nd, i-2020
Ngingathanda ukubonga DataNumen inc. ngosizo lwakho nesoftware yakho ewenzile umsebenzi wayo futhi yavumela umuntu ongenalwazi kakhulu
Kwangathi i-8th, i-2020
Ithuluzi lakho libe nesandla ekutholeni yonke i-imeyili yomkami. Ngibonga kakhulu kuwe nethimba lakho lonke ngokusinikeza lokhu kusindisa impilo futhi kulula
Umhlalaphansi we-GE Lighting
Agasti 8th, i-2019
Lo mlayezo usebenza njenge-BIG NGIYABONGA ngethuluzi lakho elihle lokulungisa i-Outlook. Ikhasimende lami belikade lihlangabezana nokunqanyulwa kukagesi okuningi
Durban, eNingizimu Afrika
Ukuthuthukiswa kwe-MS Office kuphazamise ikhompyutha yami futhi bekufanele ngisuse futhi ngifake kabusha. Ngenqubo i-Outlook ayizange yamukele endala.ost
Ngilayishe isoftware yakho yokulungisa umbono ngenxa yemilayezo yamaphutha engapheli mayelana nefayela lami le-outlook.pst elingavaliwe kahle
Umsebenzisi wekhompyutha wasekhaya
Ucezu olukhulu impela lwesoftware oluphelele ngokuphelele futhi oludonsa ngokujulile ukuthola ukususwa kanye lost ama-imeyili. Ngikwazile ukubuyisa inani eliphakeme
Le software inhle ngokwedlulele. Ngikubonga kakhulu ngokusinikeza ithuluzi elibaluleke kangaka (DataNumen Outlook Repair v 1.2 okufushane umnyuziki) ye
Izinhlelo zeDATEL & Software FZ LLC
Ababonisi be-Nexus IT
IMetton America, Inc.
Ngithole iDVDRom nge zipifayela le-ped pst. Ngikwazile ukuyikhipha futhi konke kusebenza kahle futhi.Ngifisa ukukubonga nge-
Kungenzeka ukuthi ucacise indawo negama lefayela ngalinye kuthebhu yokulungisa iBatch? Lokhu sekuvele kungenzeka kuthebhu yokulungisa, lapho
I-CB Richard Ellis Ltd.
Isikhathi esedlule ngiyathenga Datanumen Outlook Repair futhi ngiyajabula ngayo, ngiyisebenzisa ukwakha isikhathi nesikhathi. Manje ngidinga ukuthola ama-imeyili asusiwe eqenjini le-NSF
Kwangathi i-23rd, i-2018
Bengidinga ukuhlola nokususa ithoni yokungenayo
INaperville, IL, USA
Ngomhlaka 4, 2018
INorth Vancouver, BC, Canada
Advanced Outlook Repair ilungise ngokuphelele i-19GB Outlook 2007 .pst enamafolda amaningi avela eminyakeni engaphezu kwengu-15. Konakala ngemuva kwesikhathi esinzima
Isixazululo Sokulandela Amaphutha Nezinkinga Ezivamile kufayela le-Outlook PST
Ithuluzi Lokulungisa Ibhokisi Lokungenayo Alikwazi Ukubuyisa Izinto
Ithuluzi Lokulungisa Ibhokisi lokungenayo Lilenga
Ifayela Alilona Ifayela Lamafolda Lomuntu Siqu
Kutholwe amaphutha kufayela elithi xxxx.pst…
Inkinga yefayela enkulu ye-PST (usayizi wefayela le-PST ufinyelela noma weqe umkhawulo ongu-2GB).
Ama-imeyili e-Outlook nezinye izinto zisuswa ngephutha.
Khohlwa noma ulahlekelwe iphasiwedi yefayela le-PST elibethelwe.
Izici eziyinhloko ku DataNumen Outlook Repair v8.5
Ukusekelwa kweWindows 95/98 / ME / NT / 2000 / XP / Visa / 7/8 / 8.1 / 10 neWindows Server 2003/2008/2012/2016/2019. Zombili izinhlelo zokusebenza ezingama-32bit nezingu-64bit ziyasekelwa.
Ukusekela ukuthola imilayezo yemeyili, amafolda, kosts, amakhalenda, ama-aphoyintimenti, izicelo zomhlangano, oxhumana nabo, uhlu lokusabalalisa, imisebenzi, izicelo zomsebenzi, amajenali namanothi kumafayela we-PST. Zonke izakhiwo, njengesihloko, umzimba womlayezo, ukusuka, cc, bcc, usuku, njll. Ziyatholakala.
Ukusekela ukuthola ama-imeyili ngombhalo ocacile, ifomethi ye-RTF ne-HTML.
Ukusekela ukuthola izinto ezishumekiwe, njengenye i-imeyili, ama-Excel Worksheets, amadokhumenti e-Word, njll.
Ukusekela ukulungisa i-most wamafayela e-PST ithuluzi Lokulungisa Ibhokisi Lemilayezo Engenayo (Elibizwa nangokuthi ithuluzi Lokungenayo noma i-scanpst.exe) lihluleka ukulungisa namanye amathuluzi wokulungisa i-PST awakwazi ukulungisa.
Ukusekela ukuthola izinto ezisusiwe ze-Outlook, kufaka phakathi imilayezo yemeyili, amafolda, kosts, ikhalenda, ama-aphoyintimenti, izicelo zomhlangano, oxhumana nabo, uhlu lokusabalalisa, imisebenzi, izicelo zomsebenzi, amajenali namanothi.
Ukusekela ukuthola amafayela we-2GB PST amakhulu.
Ukusekela ukuthola amafayela we-PST amakhulu njenge-16777216 TB (Ie 17179869184 GB).
Ukusekela ukuthola amafayela we-PST avikelwe ngephasiwedi, kokubili ukubethela okucindezelayo nokubethela okuphezulu (noma ukubethela okuhle) kuyasekelwa. Amafayela we-PST angatholakala noma ungenayo iphasiwedi.
Ukusekela ukuguqula ifayela le-PST lisuke kufomethi ye-Outlook 97-2002 ibe yi-Outlook 2003-2019 / Outlook yefomethi ye-Office 365, Futhi ngendlela efanayo.
Ukusekela ukukhiqiza ifayela le-PST elingaguquguquki ngefomethi ye-Outlook 97-2002 ne-Outlook 2003-2019 / Outlook yefomethi ye-Office 365.
Ukusekela ukubuyisa idatha kumafayili we-PST akhohlakele noma alimele okuthi i-scanpst namanye amathuluzi wokulungisa we-PST awakwazi ukubona nokululama.
Ukusekela ukulungisa iphutha elithi "Awukwazi ukuhambisa izinto" kumafayela e-Outlook PST.
Ukusekela ukulungisa inkinga i-Outlook PST /OST ifayela lihamba kancane noma aliphenduli.
Ukushintsha okuphelele ukulawula ukuskena, ukutakula kanye nenqubo yokukhipha.
Ukusekela ukuthola idatha ye-Outlook kusuka kumafayela we-VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) angalimele noma awonakele (*. Vmdk), amafayela we-Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) (*. Vhd), Amafayela we-Acronis True Image (*. Tib), Norton Ghost amafayela (*. gho, * .v2i), amafayela weWindows NTBackup (*.bkf), Amafayela wesithombe se-ISO (*. Iso), amafayela wesithombe seDiski (*. Img), amafayela wesithombe se-CD / DVD (*. Bin), Amafayela we-Alcohol 120% Mirror Disk File (MDF) (*. Mdf) namafayela wesithombe seNero (* .nrg).
Ukusekela ukuthola idatha ye-Outlook kusuka kuthempelirary enziwe yi-Outlook lapho kwenzeka inhlekelele yedatha.
Ukusekela ukulungisa amafayela e-PST kwimidiya eyonakele, njengamadiski e-floppy, Zip amadiski, ama-CDROM, njll.
Ukusekela ukulungisa iqoqo lamafayela we-PST akhohlakele.
Ukusekela ukuthola indawo yamafayela e-PST okufanele kulungiswe kukhompyutha yendawo, ngokuya ngemibandela ethile yokusesha.
Ukusekela ukulondolozwa kwefayela le-PST elitholakele kunoma iyiphi indawo, kufaka phakathi amadrayivu enethiwekhi anamathiselwe abonwa yikhompyutha yendawo.
Sekela ukuhlanganiswa neWindows Explorer, ukuze ukwazi starukulungisa umsebenzi we-PST ngemenyu yokuqukethwe ye-Windows Explorer kalula.
Sekela imisebenzi yokudonsa nokudonsa.
Ukusekela ukulungisa ifayela le-PST elonakele ngamapharamitha womugqa womyalo.
Ukusebenzisa DataNumen Outlook Repair Ukubuyisa Amafayili we-PST Outlook Anenkohlakalo
Lapho amafayela wakho we-Outlook PST onakele noma onakalisiwe futhi ungakwazi ukuwavula ngokujwayelekile ku-Microsoft Outlook, ungasebenzisa DataNumen Outlook Repair ukuskena amafayela e-PST bese uthola idatha kusuka kumafayela ngangokunokwenzeka.
Qaphela: Ngaphambi kokulungisa ifayela le-PST elonakele noma elonakele nge DataNumen Outlook Repair, sicela uvale i-Microsoft Outlook kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ezingashintsha ifayela le-PST.
Khetha ifayili le-Outlook PST elonakele noma elonakele elizolungiswa:
Ungafaka igama lefayela le-PST ngqo noma uchofoze ifayela le- ukuphequlula bese ukhetha ifayela. Ungase futhi uchofoze ifayela le- ukuthola ifayela le-PST elizolungiswa kukhompyutha yendawo.
Uma wazi inguqulo ye-Outlook yefayela lomthombo le-PST ukuthi ilungiswe, ungayibeka ebhokisini le-combo ngaphandle kwebhokisi lokuhlela ifayela lomthombo, amafomethi akhona yi-Outlook 97-2002, i-Outlook 2003-2010, i-Outlook 2013-2019 / i-Office 365 PST file ne-Outlook 2013-2019 / Office 365 OST ifayela. Uma ushiya ifomethi njenge- "Auto Determined", lapho-ke DataNumen Outlook Repair izoskena ifayili lomthombo le-PST ukunquma ifomethi yalo ngokuzenzakalela. Noma kunjalo, lokhu kuzothatha isikhathi esingeziwe.
Ngephutha, DataNumen Outlook Repair izogcina idatha etholakele ibe yifayela elisha elinegama elithi xxxx_fixed.pst, lapho i-xxxx igama lefayela lomthombo le-PST. Isibonelo, kufayela lomthombo we-PST i-Outlook.pst, igama elizenzakalelayo lefayela elihleliwe lizoba i-Optlook_fixed.pst. Uma ufuna ukusebenzisa elinye igama, sicela ukhethe noma usethe ngokufanele:
Ungakhetha ifomethi yefayela le-PST elihleliwe ebhokisini le-combo eceleni kwebhokisi lokuhlelwa kwefayela elihleliwe, amafomethi akhona yi-Outlook 97-2002 ne-Outlook 2003-2019 / Office 365. Uma ushiya ifomethi njenge- "Auto Determined", khona-ke DataNumen Outlook Repair izokhiqiza ifayili le-PST elihleliwe elihambisana ne-Outlook efakwe kukhompyutha yendawo.
Chofoza inkinobho, futhi DataNumen Outlook Repair intando start ukuskena nokulungisa ifayili lomthombo le-PST. Ibha yenqubekela phambili
Ngemuva kwenqubo yokulungisa, uma ifayili lomthombo le-PST lingalungiswa ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomyalezo elifana naleli:
Manje usungavula ifayili le-PST elinqunyelwe nge-Microsoft Outlook. Yonke ifolda hierarchy izokwakhiwa kabusha kufayela le-PST elihleliwe futhi ama-imeyili nezinye izinto ziyatholakala futhi zibekwe kumafolda azo okuqala. Okwe-lost & Izinto ezitholakele, zizofakwa kumafolda e-Recovered_Groupxxx.
DataNumen Outlook Repair 8.5 ikhishwa ngoJanuwari 26, 2021
DataNumen Outlook Repair 7.8 ikhishwa ngoDisemba 8, 2020
DataNumen Outlook Repair 7.6 ikhishwe ngo-Okthoba 31, 2020
DataNumen Outlook Repair 7.5 ikhishwa ngo-Agasti 8th, 2020
DataNumen Outlook Repair 7.2 ikhishwa ngoJuni 19, 2020
Thuthukisa ukuhambisana kwenguqulo engu-64bit.
DataNumen Outlook Repair 7.1 ikhishwa ngoJanuwari 22, 2020
Yehlisa inkumbulo esetshenziswe kunqubo yokutakula.
DataNumen Outlook Repair 7.0 ikhishwa ngoDisemba 30, 2019
DataNumen Outlook Repair 6.9 ikhishwa ngoSepthemba 27, 2019
Thuthukisa umsebenzi wokusesha.
DataNumen Outlook Repair 6.8 ikhishwa ngoJuni 29, 2019
Susa ukungahambelani kufayela le-PST elihleliwe.
DataNumen Outlook Repair 6.6 ikhishwa ngoMashi 28, 2019
DataNumen Outlook Repair 6.5 ikhishwa ngoDisemba 28, 2018
Sekela i-Outlook 2019.
Susa ngokuzenzakalela izinto ezingenamsebenzi.
DataNumen Outlook Repair 6.0 ikhishwe ngo-Okthoba 12, 2018
Thuthukisa ukutakula kwamafayela amakhulu.
Nikeza izilawuli eziningi kulogi yokulungisa.
DataNumen Outlook Repair 5.6 ikhishwa ngoJuni 23, 2018
Sekela i-Outlook yeHhovisi 365.
Thuthukisa ukusebenza kwenguqulo engu-64bit.
DataNumen Outlook Repair 5.5 ikhishwa ngoMashi 29, 2018
Ukusekela ukubuyisa amafolda nemilayezo esusiwe.
Sekela i-Outlook 2016.
DataNumen Outlook Repair 5.3 ikhishwa ngoJulayi 16, 2015
Ukusekelwa kokuthola izigaxa zedatha ezingavumelekile.
Ukusekela ukulawula ukuthi ungathola yini okususiwe, okufihliwe noma oku-lost futhi bathola izinto.
Ukusekela ukulungisa iphutha elithi “Ayikwazi ukuhambisa izinto” kumafayela e-Outlook PST.
DataNumen Outlook Repair 5.2 ikhishwa ngoSepthemba 23, 2014
Nciphisa ukusetshenziswa kwememori.
DataNumen Outlook Repair 5.1 ikhishwa ngoJulayi 9, 2014
Sekela i-64bit Outlook.
DataNumen Outlook Repair 4.5 ikhishwa ngo-Ephreli 15, 2014
Ukusekela ukuthola idatha ye-Outlook kusuka kumafayela we-VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) angalimele noma awonakele (* .vmdk), amafayela e-Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) (* .vhd), Amafayela we-Acronis True Image (* .tib), Norton Ghost amafayela (* .gho, * .v2i), amafayela we-Windows NTBackup (*.bkf), Amafayela wesithombe se-ISO (* .iso), amafayela wesithombe seDiski (* .img), amafayela wesithombe se-CD / DVD (* .bin), amafayela we-Alcohol 120% Mirror Disk File (MDF) (* .mdf) namafayela wesithombe seNero (* .nrg).
DataNumen Outlook Repair 4.1 ikhishwa ngoFebhuwari 12, 2014
DataNumen Outlook Repair 4.0 ikhishwa ngoDisemba 12, 2013
Sekela iMicrosoft Outlook 2013.
DataNumen Outlook Repair 2.1 ikhishwa ngo-Ephreli 28, 2009
DataNumen Outlook Repair 2.0 ikhishwa ngoJulayi 5, 2008
DataNumen Outlook Repair 1.5 ikhishwe ngoMeyi 28, 2008
Sekela iMicrosoft Windows Vista.
DataNumen Outlook Repair 1.4 ikhishwe ngoMeyi 7, 2007
Sekela iMicrosoft Outlook 2007.
Lungisa isiphazamiso ekucubunguleni imilayezo emikhulu.
DataNumen Outlook Repair 1.2 ikhishwe ngomhlaka-9 Okthoba 2006
Sekela izindlela zokutakula ezithuthukile.
DataNumen Outlook Repair 1.1 ikhishwa ngoDisemba 31, 2005
Ukusekela ukuthola ifomethi yefayili ye-PST ngokuzenzekelayo.
Ukusekela ukuthola ifomethi yefayili ye-PST ekhiphayo ngokuzenzakalela ngokuya ngenguqulo ye-Outlook efakwe kukhompyutha yendawo.
Ukusekela ukuthola nokukhetha amafayela e-PST azolungiswa kukhompyutha yendawo, ngokuya ngemibandela ethile yokusesha.
DataNumen Outlook Repair 1.0 ikhishwa ngoNovemba 19, 2005
Ithuluzi elinamandla lokuphinda amafayela okhohlakele e-Microsoft Outlook amafolda wakho (.pst).
Lungisa futhi uthole amafayela we-Microsoft Excel xls, xlw nama-xlsx akhohlakele noma onakalisiwe.